Ogow Wakhtiga Garoonka Cayaaraha Stadium Muqdisho dib loo furi doono - Awdinle Online
Ogow Wakhtiga Garoonka Cayaaraha Stadium Muqdisho dib loo furi doono
December 18, 2019 (Awdinle Online) – Dhismaha iyo dib u dayactirka Garoonka Cayaaraha ee Stadium Muqdisho ayaa ku dhaw in la dhameystiro, waxaana la filayaa in dhawaan dib loo furo, laguna qabto tartamo kubadda cagta ah, sida ay sheegtay Wasiiradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Federaalka Khadiija Maxamed Diiriye.
Wasiiradda, Agaasimaha guud ee Wasaaradda, ciyaartoy ka timid dalka dibadiisa iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta kormeed ku tagay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho, waxeyna soo qiimeynayeen dhismaha dhamaadka maraya ee ka socda halkaas.
Seynab Maxamuud Warsame (Xaabseey) oo ah gudoomiyaha dagmada Warta Nabadda ayaa warbixin kooban ka siisay Wasiiradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, Masuuliyiintii la socotay iyo sidoo kale ciyaartoyda heerka uu marayo dhismaha.
Basma Caamir Shakeeti ayaa sidoo kale kalmadeeda ka qaadatay, waxeyna aad uga mahad celisay maamulka dagmada Warta Nabadda sida ay howshaan u furliyeen.
Khadiijo Maxamed Diiriye waxey sheegtay in dhismaha dhawaan lasoo afjari doono, isla markaana bisha Janaayo ee 2020 daaha laga qaadi doono garoonka ugu weyn Soomaaliya, waxeyna sidoo kale sheegtay in tartamo kala duwan lagu qaban doono.
Garoonka Stadium Muqdisho oo ka mid ah kuwa ugu weyn qaaradda Afrika ayaa la dhisay 1978.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Asluubta Xabsiga Dhaxe ee Xamar oo Shaqo Joojin iyo Xarig la isugu darey
Next articleIMF Board approves plan to cover the Fund’s share of debt relief to Somalia